NASA-SpaceX Demo-2 အာကသလွန်းပျံယာဉ် လွှတ်တင်မှုကို ရွှေ့ဆိုင်းခြင်း
Instagram မှာ Follower အများဆုံး ပိုင်ဆိုင်ထားတဲ့ ဆယ်လီတွေက ဘယ်သူတွေဖြစ်မလဲ?
ကိုယ်Crushနေတဲ့သူဆီက Attention ရအောင်လုပ်တာက ရှက်ဖို့ကောင်းတဲ့အရာမဟုတ်ပါဘူးနော်။
ဒီမစ်ရှင်ဟာ ၂၀၁၁ ခုနှစ်အာကာသလွန်းပျံယာဉ်အနားယူပြီးတဲ့နောက်လူသားတွေဟာအမေရိကန်ပြည်ထောင်စုမြေပေါ်ကအာကာသစခန်းကိုပျံသန်းတော့မယ်ဆိုတာပထမဆုံးအကြိမ်ဖြစ်ပါတယ်။
ချစ်သူနှစ်ဦးကြားဆက်ဆံရေးတွေ အဆိုးရွားဆုံးအခြေအနေကို မရောက်ခင်မှာ အခြေအနေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေရှိတတ်ပါတယ်။ ဒီလိုလက္ခဏာတွေကို တွေ့မြင်ခံစားလာရပြီဆိုရင် နှစ်ဦးကြားက အချစ်ရေးကို အချိန်မှီးပြန်လည်ပြုပြင်မလား၊ ဒီအတိုင်းအဆုံးသတ်လိုက်မလားဆိုတာကို ရွေးချယ်ရမှာပါ။ ဒီတော့ အချစ်ရေး အခြေအနေမကောင်းတဲ့ လက္ခဏာတွေက ဘာတွေဖြစ်မလဲဆိုတာ ဖော်ပြပေးလိုက်ပါတယ်။ ၁။ အဆက်အသွယ် နည်းလာမယ် ချစ်သူနှစ်ဦးကြားမှာ ဆက်ဆံရေးပျက်စီးတော့မယ်ဆိုရင် ပထမဆုံးမြင်တွေ့ရတဲ့လက္ခဏာက အဆက်အသွယ်တွေ ...
မေလ(၂၈)ရက်နေ့မှာ မင်းသား Jung IL Woo က Lee Min Ho ရဲ့ “The King: Eternal Monarch” ရိုက်ကွင်းကို Pizza Truck ပို့ပြီးအားပေးခဲ့ပါတယ်။ “မင်ဟိုရေ..မင်းအကောင်းဆုံးလုပ်နိုင်ခဲ့ပါတယ်။ ပင်ပန်းသွားခဲ့ပြီ” ဆိုပြီး စာလေးလည်း ရေးထားပါသေးတယ်။ Jung IL ...
လူတိုင်းကြုံတွေ့ရတတ်တဲ့ ပြဿနာကတော့ ကိုယ့်မျက်နှာ အရေပြားအမျိုးအစားကို မသိပဲ မှားယွင်းစွာ skin care တွေ အသုံးပြုမိနေကြတာ ပဲဖြစ်ပါတယ်။ အဲ့တာကြောင့် ကိုယ့်အရေပြားက ဘယ်အမျိုးအစားထဲမှာ ပါလဲဆိုတာ သိနိုင်အောင် အောက်မှာ ဖော်ပြပေးထားတဲ့ အချက်တွေကို ကြည့်လိုက်ကြရအောင်………. ပထမဆုံး မိတ်ကပ်တွေကို စင်ကြယ်အောင် ဖျက်လိုက်ပါ။ ပြီးရင်တော့ ...
10. Taylor Swift: 133.3 million followers View this post on Instagram Cat lady thirst trap A post shared by Taylor Swift (@taylorswift) on Jul 13, ...
လီမင်ဟိုက ကောင်မလေးတွေရဲ့ အချစ်ဦးလည်းဖြစ်ခဲ့ပြီး ထွက်သမျှDramaတိုင်းကလည်း နိုင်ငံတကာမှာပါ အောင်မြင်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းတွေဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့် လီမင်ဟိုရဲ့ အမာခံ ပရိတ်သတ်တွေ ဘယ်နှစ်ယာက်လောက်ရှိမလဲဆိုတာ ဒီDrama(၅)ခုလုံး ကြည့်ဖူးလား ကြည့်လိုက်ရအောင်နော်.. 1.Boys Over Flower လီမင်ဟိုဆိုပြီး ရင်ထဲပထမဆုံးရောက်ခဲ့တဲ့ ဇာတ်လမ်းလေးပေါ့နော်။ F4 လေးယောက်ရဲ့ ပုံရိပ်တွေက အခုထိ ...
(၁) အိပ််ရာကနေ ပုံမှန်ထက် ၃၀မိနစ်စောပြီးထပါ။ လေကောင်းလေ သန့်ရှူရှိုက်ပါ။ဒါကသိပ်အကျိုးထိရောက်မှာမဟုတ်ဘူးလို့သင်ထင်ကောင်း ထင်နိုင်ပါတယ်။ဒါပေမယ့်တကယ်တော့ ဒီအချက်ကအများကြီးကို အကျိုးရှိပါတယ်။ သင်စောစောထခြင်းဖြင့် အလောတကြီး ဘယ်အရာကိုမှလုပ်စရာမလိုတော့ပါဘူး။ အလောတကြီးမလုပ်တဲ့အတွက် မေ့ကျန်ခြင်း၊ခလုတ်တိုက်ခြင်း စတဲ့စိတ်အနှောက်အယှက်ဖြစ်စရာတွေမတွေ့နိုင်တော့ပါဘူး။ အကျိုးဆက်ကတော့ သင်တစ်နေ့လုံး အလုပ်လုပ်လို့ကောင်းနေမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ကောင်းမွန်တဲ့ မနက်ခင်းတစ်ခုက နေ့တစ်နေ့ရဲ့ပြည့်စံုခြင်းကို ဖန်တီးနိုင်ပါတယ်။ (၂) ...
Lock Down ကြောင့်ကွဲကွာသွားတဲ့ မြည်းလေး နဲ့ ပိုင်ရှင်ဖြစ်သူ
ဒီလိုအချိန်မှာ ကမ္ဘာတဝှမ်းမှာ ဝမ်းနည်းစရာအကြောင်းလေးတွေ တွေ့ကြုံနေရပါတယ်။ ယခုအကြောင်းလေးကလည်း Lock Down နဲ့ပတ်သက်နေတာပါ။